दाहाखानी, १० माघ
करिब पाँच महिना अघि ठ्याक्कै घटस्थापनाको दिन। इच्छाकामना गाउँपालिका ७ दाहाखानी नयाँगाउँका ४५ वर्षीय पदम बहादुर गुरुङले त्यो दिन अब जीवनमा चाहेर पनि भुल्न नसक्ने भएको छ। उनका लागि त्यो दिन जीन्दगीको कहाली लाग्दो कालो दिनको रुपमा सम्झनामा रहनेछ।
यसपालीको बडाँदशैं नजिकै आईसकेको थियो। दशैंको लागि नै गाउँघरमा चटारो सुरु भैसकेको थियो। गाउँघरमा कोहि दशैको लागि किनमेल गर्न बजार तिर लागेको थिए भने कोहि घर रंगाउन, पिङ हाल्ने तयारीमा थिए। यस्तै कोहि गाउँमै लाग्ने अष्टमी मेलाको तयारीमा थिए। उनको पनि श्रीमती दशैंको किनमेलका लागि बजार गएका थिए। उनको परिवार सानो थियो। एक छोरा एक छोरी र श्रीमान श्रीमती गरि जम्मा ४ जना।
खेतिकिसानी गरेर जेनतेन सुखदुःख परिवार चलेकै थियो पदमको। त्यो दिन छोरा छोरी पढ्न विद्यालय गइसकेका थिए। उनी भने गाईभैसीलाई घाँस झार्नको लागि गाउँ नजिकै रहेको खनियाँको रुखमा चढे। उनलाई समय भने अझै याद छ। गुरुङ भन्छन् –‘त्यो बेला दिउँसो त्यस्तै करिब १ बजेको थियो होला, म घाँस काट्दै थिए, फुत्त चिप्लेको जस्तो लागेको थियो, त्यसपछि मैले केहि थाहा पाउनै सकेन बेहोश भएछु म त।’
धेरै पछि होशमा आउँदा हस्पिटलमा उनले आफुलाई हस्पिटलमा पाए। होसमा आए पछि जिउँ दुख्न थाल्यो। आफ्नै ज्यान भारी भो। पल्टिन खोजे सकेनन्। उठ्न खोजे कम्मरदेखि तलको भाग त चलाउनै सकेनन् उनले। त्यसपछि के भो भनेर सोध्दा घटनाको विषयमा अरुले भनेपछि बल्ल आफुलाई के भएको थाहा पाए उनले। घटनाका बेलिबिस्तार सुन्दा पो पदम छाँगाबाट खसेजस्तो भो। सपनाजस्तो भो उनलाई।
घटनानुसार दिउँसो १ बजे उनले घाँस काट्न चढेको खनियाँको रुखबाट सिधै तल खसेर बेहोस भएको रहेछ। वरपर कसैले थाहा पाएनन् पदम रुखबाट खसेको। न उनले आफुलाई उद्दार गर्नको लागि कसैलाई गुहार माग्न सके। जब चार बजे तिर गाई बाख्रा चराउने गोठालाहरु फर्कन थाले तब गाउँकै एक बहिनीले उनलाई घाईते भै बेहोस अवस्थामा देखे तब मात्र उनको उद्दारका लागि पहल भो। गाउँमा हल्लिखल्ली हुन थाल्यो। गाउँका सबै भेला भएर उनलाई घटनास्थलबाट दाहाखानी स्वास्थ्यचौकीसम्म ल्याए त्यहाँ उनको उपचार हुन नसक्ने भएपछि एम्बुलेन्स बोलाईयो। यतिबेलासम्म साँझको करिब ६ बज्न लागिसकेको थियो।
उनको गाउँ भरतपुर महानगरपालिका २९ स्थित भोर्लेबाट करिब २ घण्टा कच्ची मोटरबाटोको यात्रा पछि मात्र पुग्न सकिन्छ। त्यसैले एम्बुलेन्स आईपुग्दा रातको झण्डै साढे ८ बजिसकेको थियो। उनलाई उपचारको लागि भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेज पु¥याउदा रातको करिब साढे ११ बजिसकेको थियो। उनको उपचार त सुरु भयो तर अपसोच उपचारले पूर्णता पाउने अवस्था रहेन। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भाचिएको मेरुदण्डमा स्टील प्रयोग गरे पदम पहिले झै हिडडुल गर्न सक्ने गरि उपचार त हुन्छ तर उपचारका लागि झण्डै ८ लाख रुपैयाँ लाग्ने बतायो। यसपछि उनको परिवारमा अर्को चिन्ता थपियो। कारण गाउँमा रहेको पाखोबारीमा खेतीकिसानी गरेर सामान्य आम्दानीमा जिवीकोपार्जन गरिरहेको यो परिवारले उपचारको लागि झण्डै ८ लाख रुपैयाँ जुटाउनु भनेको फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै हो। उनको घरबारी बेचेपनि उपचारका लागि चाहिने आधा रकम पनि जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। तै पनि श्वास रहुन्जेल आश हुन्छ भने झै उनको परिवारले उपचार खर्चका लागि ऋण जुटाउने प्रयास त ग¥यो तर ऋण पत्याउने कस्ले।
एक त घरमा कमाएर ल्याउने मान्छेको हालत नै अपाङ्ग अवस्थामा पुगेको देखेसी आफ्नैले समेत यसले कसरी तिर्छ त्यत्रो पैसा ऋण भन्ने भयो होला एक रुपैयाँ ऋण कसैले नपत्याएको पिडित पदमका श्रीमति मनमाया गुरुङ बताउछन्। उनी दुःखी हुदै भन्छिन् –‘मसँग पैसा थिएन, ऋण खोज्दा कसैले पत्याएन, अनि त उपचार गर्ने उपाय नै भएन।’
उपचार खर्च जुटाउने अवस्था नभएपछि अस्पतालले पनि बिरामी घर लैजान दबाब दिन थाले। उपचार खर्च जुटाउने सबै उपाय सकेपछि उपचार नै नगरी परिवारले घाईते अवस्थामा नै पदमलाई घर फर्काए। यसपछि अहिले झण्डै पाँच महिना भो पदम ओछ्यानमा सुत्न थालेको। उनको कम्मर देखिको तल्लो भाग चल्दैन। दिसा पिसाब अरुले नै गराईदिनुपर्छ त्यो पनि औषधी खाएपछि मात्र दिसा पिसाब आउँछ। दिशा पिसाव गर्न गाह्रो हुने भएकोले उनले खानेकुरा पनि अलिकति जाउलो मात्र खाने गरेको छ।
अहिले आफ्नो अवस्था सम्झदा र देख्दा पदमलाई साह्रै पिडा हुन्छ । ‘परिवारले के–कसरी खाने खर्च जुटाईरहेको होला?, हुर्कदै गरेका छोराछोरीको भविष्य के होला? सम्झदै कहाली लाग्ने गरेको पिडित पदम बताउछन्।
उनलाई केहि आशा पनि छ। उनले धेरै सुनेका थिए आफु जस्तै धेरै पिडितहरुलाई मनकारी दयालु मान्छेहरुले सहयोग गरेर उपचार गरिदिएका। कतै त्यस्तै कुनै मनकारी दयालु मान्छे उनको जीवनमा पनि सहयोग लिएर आउछ कि भन्ने आशा लागिरहन्छ उनलाई र त पदम घर आगनमा कोहि नयाँ मान्छे देखियोको कतै मैलाई सहयोगका लागि आएको होकि भनेर आधा नचल्ने ज्यान तन्काएर हेरिरहन्छन्।
यदि तपाई पदम बहादुर गुरुङको उपचारमा सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने निम्नानुसारको मोबाईलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
मनमाया गुरुङ (श्रीमती) मो. ९८२५२४१७९७
इच्छाकामना न्युज डटकम मो. ९८५६०४६४५३
बुद्धिमान गुरुङ (स्थानीय शिक्षक) ९८१७२५५७१४